TAG Heuer uye nhangemutange yake neApple Watch | Ndinobva mac
TAG Heuer uye nhangemutange yake neApple Watch
Makambani emawadhi echinyakare ari kudedera nekuuya kuri kuuya kwe Apple Watch uye ndeyekuti kusiyana nevamwe vagadziri vemawadhi akangwara, Apple yaenda kure zvakanyanya uye yakagadzira kwete chete smartwatch nyowani, yagadzira wachi nyowani dzinogona kutariswa sezvishongo.
TAG Heuer anochiziva uye ndosaka chiri kuda kumira kune avo veCupertino nekutangisa kweye smart wachi inogona kuve nemimba nerubatsiro rwemamwe makambani etekinoroji ayo kusvika parizvino vasina kutaura.
Takanzwa nhau idzi mushure mekunge kambani ye TAG Heuer yapa musangano nevatori venhau muSwitzerland uko mukuru wechiratidzo, Jean Claude Biver, akavimbisa kuti pakutanga vakanga vasingafarire wachi iyi, asi kuti pakupedzisira nemwedzi yakati wandei yapfuura. Ivo vatanga neprojekti kuvhura TAG Heuer wachi, asi yerudzi rwakangwara.
Kunyangwe zvakataurwa kuti ivo vane kunyange zvibvumirano zvakavharwa nemamwe makambani ehunyanzvi anozovabatsira muchirongwa ichi, havasati varatidza chero wachi yewachi iyo maererano navo inogona kuve hybrid pakati pewachi ine michina zvikamu uye imwe ine Intel musimboti yaigona kudzora akasiyana biometric sensors.
Nezve pavanoronga kuvhura iyi nyowani TAG Heuer chishamiso, zvakataurwa kuti vanotarisira kuti vachange vagadzirira mukupera kwa2015, izvo zviri kuzopa Apple mukana unopfuura zvakakwana kutora chidimbu chikuru chemusika wekutarisa zveumbozha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » TAG Heuer uye nhangemutange yake neApple Watch
Maitiro ekugonesa iyo Dzokorora sarudzo mu iTunes 12
Pixelmator yeMac inogadziridzwa pamwe nekuvandudzwa kwakawanda kwekuita kusanganisira pini uye kutsigira zoom